Tirada ku dhintey daadadkii Jabuuti oo korodhey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Waxa sii kordhey tirada guud ee ku dhintey daadadkii Jabuuti ee ka soo rogmadey dooxa Weeca oo magaalada si toosa u soo gala. Inkastoo dawlada Turkigu ay u dhistey biyo xidheen joojiyay biyo aad u farabadan oo la’aantii ay ka dhalan lahayd qasaare balaadhasn, haddana waa intii soo dhaaftey.
Ciida lagu dhisay biyo xidhenkan uu Turkigu dhisay bixiyayna boqolkiiba boqol lacagta ku baxdey ayaa laga soo qaaday gobolka Awdal halkaas oo ay xaalufiyeen ciida niista loo yaqaan ee lagu dhiso guryaha.
Xukuumada Jabuuti ayaa ku fashilantey inay ka hortagto daadka oo ay ka badbnaadiso dadkaas uula tagey daadku. Wasiirka arimaha gudaha oo ka hadlayay qasaaraha ayaa sheegay in 10 qof ku dhinteen daadadka.
”Waxa jira afar qof oo meel wada jooga oo daadku la tagey iyo laba isku dayay inay ka dabaashaan. Halka 4 kale uu la tagey ayuu yiri Muumin.
Wuxuu kaloo qirtey inay sameeyeen qaladaado farabadan iyo in hawsha feedh iyo laad iyo qorshe la’aan lagu waday. Waxa ka mid ahaa sida wax lagu waday adigu halkaa tag adna halkaa tag ayuu yiri.